"ရွှေလီ" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ - ဝီကီပီးဒီးယား
"ရွှေလီ" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ
၀၅:၄၂၊ ၁၉ မတ် ၂၀၁၁ ရက်နေ့က မူ
၁၅ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၉ နှစ်
၀၄:၁၃၊ ၄ မတ် ၂၀၁၀ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
၀၅:၄၂၊ ၁၉ မတ် ၂၀၁၁ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
'''ရွှေလီ''' ကို တရုတ်ဘာသာအားဖြင့် ([[Simplified Chinese|simp.]]: 瑞丽市; [[Traditional Chinese|trad.]]: 瑞麗市; [[Pinyin]]: Ruìlì Shì) ဟုခေါ်ဆိုပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၊ [[ယူနန်ပြည်နယ်]]၊ [[တယ်ဟုန်ခရိုင်]]အတွင်းရှိ [[ကောင်တီ]]အဆင့်ရှိ မြို့ တစ်မြို့ ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၊ [[မူဆယ်မြို့]]နှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ပြုလုပ်သော နယ်ခြားမြို့ ဖြစ်သည်။ ဧရိယာ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၁၀၂၀) (၃၉၃,၈ စတုရန်းမိုင်) ကျယ်ဝန်းသည်။
== ရွှေလီ(သို့မဟုတ်)မိုင်းမော ==
ရွှေလီမြို့ကို ရှေးယခင်က မိုင်းမောမြို့ ဟုခေါ်ဆိုသည်။ တရုတ်ဘာသာစကားအားဖြင့် မွင့်မောင်ဟု အသံထွက်ရပါသည်။ ယခုအမည်ဖြစ်သော ရွှေလီကို တရုတ်ဘာသာစကားအားဖြင့် ရွေ့လိ ဟုခေါ်ဆိုသည်။ ရွေ့မှာ ကံကောင်းခြင်း ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပြီး၊ လိမှာ လှပခြင်း ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
== ပထဝီဝင်အနေအထား ==
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသောမြို့ ဖြစ်သည်။ လူဦးရေ၏ ၆၄% မှာ တောင်ပေါ်နေတိုင်းရင်းသား (၅)မျိုးတို့ဖြစ်ကြသည်။ တိုင်လူမျိုး၊ ဂျိန်းဖော့လူမျိုး၊ ဒယ်အန်လူမျိုး၊ လီဆူးလူမျိုးနှင့် အာချန်လူမျိုးတို့ဖြစ်ကြသည်။ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအတွက် အရေးပါသော မြို့တစ်မြို့ ဖြစ်သည်။ <ref>[http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=4333 Yunnan’s Sin City], The Irrawaddy, January 2005</ref><ref name=time270999>[http://www.time.com/time/asia/magazine/99/0927/ruili.html Sex, Drugs and The Roll of Dice], Time Asia, September 27, 1999</ref>
== လူဦးရေနှင့်လူမျိုးများ ==
[[တရုတ်]] လူမျိုးနှင့် [[တိုင်လူမျိုး]]များသည် မြို့တွင်း ချိုင့်ဝှမ်းဒေသတွင် နေထိုင်ကြပြီး [[ဂျိန်းဖော့လူမျိုး]]နှင့် [[ဒဲအန်လူမျိုး]]တို့သည် မြို့ဆင်ခြေဖုံးဒေသများတွင် နေထိုင်ကြသည်။ လူဦးရေ ၁၄၀,၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။
== စက်မှုဇုန်များ ==
* [[ဝမ်တိန် နယ်ခြားကုန်သွယ်မှုဇုန်]]
* [[ရွှေလီ နယ်ခြားကုန်သွယ်မှုဇုန်]]
== ပြင်ပလင့်ခ်များ ==
* [http://www.rl.gov.cn/ Ruili City Official Website]
* [http://www.rlr.gov.cn/ Ruili Municipal People's Government]
* [http://www.guardian.co.uk/burma/story/0,,2179815,00.html Article about Ruili's economy]
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/76369" မှ ရယူရန်